DMC-FT6GA Lumix Digital Camera - Panasonic
LUMIX Digital Camera DMC-FT6GA
ပြင်ပ၏ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အရာများ ခံစားရန်အတွက် ရေလုံသော၊ ရေခဲမရိုက်သော၊ အကြမ်းခံသော၊ ဖုန်မဝင်သော ကာကွယ်မှုများနှင့် ဖိအား ကာကွယ်ထားခြင်းတို့ဖြင့် အမြင့်မားဆုံး ကြံခိုင်မှု
LUMIX DMC-FT6 13 m / 43 ft ထိ ရေလုံသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 100 kgf ဖိအားကာကွယ်မှု၊ ဆောင်ရွက်ချက်များစွာ ပြုလုပ်နိုင်သော ကင်မရာဖြစ်စေရန်အတွက် NFC နည်းပညာဖြင့် Wi-Fi® ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် ရွေးချယ်မှုများစွာ ပါဝင်ပါသည်။
နွေဦးအချိန်တွင် ငါးဖမ်းရန် သို့မဟုတ် အပျော်စခန်းချ ခရီးထွက်ရန်၊ နွေရာသီတွင် ဒိုင်ဗင်ထိုးရန်၊ ရေအောက်အသက်ရှူပိုက်ဖြင့် ရေငုံ့ရန်၊ လှိုင်းစီးရန်၊ ဆောင်းဦးတွင် တောင်တက်ရန်နှင့် ဆောင်းရာသီတွင် နှင်းလျှောစီးရန် သို့မဟုတ် snowboarding စီးရန်အတွက် ကင်မရာကိုထုတ်လိုက်ပါ။ ဤမိုဒယ်သည် အံ့အားသင့်စရာကောင်းသော အမှတ်တရများကို လှပသော ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး တက်ကြွလျှက်ရှိသည့် ကစားသမားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
- 13 m / 43 ft ထိ ရေလုံပါသည်
- 100 kgf ထိ ဖိအား ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
-2m / 6.6 ft အကြမ်းခံနိုင်ခြင်း
- -10 °C / 14 °F ထိရေခဲမရိုက်ခြင်း
ကင်မရာတွင်းရှိ GPS (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နေရာပြစနစ်) သည် တိုးမြှင့်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တုအရေအတွက်များအတွက် အာရုံခံခြင်းတိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန် GLONASS (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နေရာပြသည့် ဂြိုလ်တုစနစ်) နှင့် ပေါင်းစည်းထားပါသည်။
ဤကင်မရာအား ပြင်ပတွင် အဓိက အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် အမြင့် ၊ ဘာရိုမီတာဖိအားနှင့် တည်နေရာအချက်အလက်များကို ပြသရန်နှင့် မှတ်သားရန်အတွက် GPS ၊ ကွန်းပတ်စ်၊ အမြင့်ပြကိရိယာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဘာရိုမီတာသည် ခြေအောက်အနက်အား ညွှန်ပြသည့် ကိရိယာအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ရေအောက်ဓာတ်ပုံများကို ပိုပြီး သဘာဝကျစေရန်အတွက် ခေတ်မီ ရေအောက်အနေအထား၏ အနီရောင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းသည် ရေအောက်ရိုက်ကူးခြင်းတွင် လွယ်လွယ်ကူကူပျောက်ကွက်သွားတတ်တဲ့ အနီရောင်အတွက် ပြန်လည်ထေပေးပါသည်။ အားကစား၊ နှင်း၊ ကမ်းခြေနှင့် ရေအောက်အသက်ရှူပိုက်ဖြင့် ရေငုံ့ခြင်း အနေအထားအား Menu မှ လွယ်ကူစွာနှင့် လျှင်မြန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီကင်မရာမှာ 28mm wide-angle (35mm ကင်မရာနှင့် ညီမျှသည်:35mm) 4.6x optical zoom နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော LEICA DC lens ပါဝင်ပါသည်။ 28-128mm)။ lens ရဲ့ မာကျောမှုရှိခြင်းအား သေချာစေရန်အတွက် shaft guide ရဲ့ folded optics နည်းလမ်းအား အသုံးပြုထားပါသည်။ Leica ရဲ့ တင်းကျင်တဲ့ စံနှုန်းတွေကို အောင်မြင်ခြင်းကြောင့် မှန်ဘီလူးများမှာ ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် မှန်ဘီလူးအဖုံးအတွက် အငွေ့မရိုက်တဲ့မှန်က မှန်ဘီလူးအား ရေနွေးငွေ့ရိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
The POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer) က ကြိမ်နှုန်းနိမ့်တုန်ခါခြင်းဖြစ်စေသည့် လက်တုန်ခြင်းဖြစ်ပွားသည့် အပိုင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး များသောအားဖြင့် Shutter ခလုတ် နှိပ်နေချိန် သို့မဟုတ် နှေးကွေးတဲ့ Shutter အမြန်နှုန်းနဲ့ ညအချိန်မှာ ရိုက်ကူးနေရင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ O.I.S ဟာ လက်တုန်ခါမှု အဖြစ်မခံသော အားကောင်းသော zoom ရိုက်ချက်တွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
16.1-megapixel ရှိသော မြင့်မားစွာအာရုံခံနိုင်သည့် MOS sensor သည် ဖြစ်နိုင်သော ခေတ်မီအင်္ဂါရပ်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် မြန်နှုန်းမြင့် ဆစ်ဂနယ်အထွက်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကို ဂုဏ်ယူပါသည်။ ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများကို ISO3200 ထိ full resolution ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖန်တီးမှု Panorama လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ယခင်ဓာတ်ပုံများကို ထပ်ထားပြီး ယခင်ဆက်တိုက်ရိုက်ချက်များနှင့် ထောင်လိုက်/အလျားလိုက်ရိုက်ချက်များကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး ဖန်တီးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း filter အထူးပြုလုပ်ချက်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဖန်တီးထိန်းချုပ်မှု (ရိုက်ကူးရေးအနေအထားတွင်ရှိသော) နှင့် ဖန်တီးမှုခဲထိုးခြင်း* (in the playback mode) ပုံမှန်အနေအထားများကို အထူးမြင်ကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ခံစားမှုကို ထိထိမိမိပြနိုင်သော စွမ်းအားကို ပေးပါသည်။
Expressive, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Dynamic Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect**, Miniature Effect**, Soft Focus*, Star Filter*, One Point Color.
* ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတစ်ခုတည်းသာ ဆောင်ရွက်ခြင်း
** ဖန်တီးမှုPanorama အဖြစ် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
full-HD 1,920 x 1,080 ဗီဒီယိုများကို AVCHD Progressive နှင့် MP4 format ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ 60p (NTSC နေရာ အတွက်) / 50p (PAL နေရာအတွက်) full-HD ရိုက်ကူးခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး လျှင်မြန်သော သို့မဟုတ် လုံးဝအသေးစိတ် ရိုက်ကူးရမည့် အရာဝတ္ထုများအား ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ပြန်ထည်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပန်းများပွင့်လန်းလာခြင်း သို့မဟုတ် တိမ်တိုက်များ တရိပ်ရိပ်လွင့်နေခြင်းကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သော အရာဝတ္ထုများကို ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် ကင်မရာအား ဒီအတိုင်းထားထားပါ။ ပုံမှန်အရှိန်ထက်နှေးသော ရိုက်ချက်များ ဗီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်ကူးရန်အတွက် အခန်းဆက်အလိုက် ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံစီးရီးများကို ကင်မရာထဲတွင် ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်မီးသည် မှုန်ဝါးသော ရေအောက်ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ညဖက် ယာယီတဲထိုးသည့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများတွင်ပါ လှပသော ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။ ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်အား မဖွင့်ရသေးလျှင်ပင် အရာဝတ္ထုအား အလင်းရရှိစေရန်အတွက် အလင်းကိုသာဖွင့်ထားလိုပါကလည်း ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
NFC သည် Wi-Fi® ချိတ်ဆက်ခြင်းအား ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ NFC အသုံးပြုနိုင်သော စမတ်ဖုန်း/တက်ဘတ်အား ကင်မရာနှင့် ထိလိုက်ရုံဖြင့် သို့မဟုတ် QR ကုဒ်အား စကင်ဖတ်ခြင်းဖြင့် Wi-Fi * အား ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
• ဤ function အား Android (2.3.3 သို့မဟုတ် အထက်) ရှိသော NFC အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မိမိရိုက်လိုသည်ကိုသာထင်းစေပြီး နောက်ခံကိုမှုန်ဝါးစေခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် အလင်းဝင်ပေါက်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး လှုပ်ရှားစေသည့်အရာဝတ္ထုများကို ရပ်တန့်နေသည့်ပုံစံဖြင့်ရိုက်နိုင်စေရန်အတွက် Shutter အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်စေသလို လှုပ်ရှားမှု၏ ခံစားမှုကို ပုံကြီးချဲ့နိုင်စေရန်အတွက် motion blur တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ထိုမိုဒယ်တွင် 3.0 လက်မ ခန့်မှန်းခြေ 460k-dot ရှိသည့် LCD နှင့် ခန့်မှန်းခြေ 100% field of view ပါဝင်ပါသည်။ LUMIX ၏ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသော Intelligent LCD function သည် ရိုက်ကူးရေး အခြေအနေများအတိုင်း အဆင့် 11 ဆင့်ဖြင့် တောက်ပမှုကို အလိုအလျှောက် ချိန်ညှိပါသည်။ ၄င်းသည် မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှုကို ဝေမျှစေနိုင်ပါသည်။